Cây Quế | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cây Quế | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Igama lesiNgesi/igama leNzululwazi: Cinnamo
Amanye amagama: ICinnamon, iCinnamon enye, iCinnamon yaseTshayina, iQue Thanh, Ngoc Thu, Nhu Que, May Que (Tay), Kia (Dao) …
Usapho lweCamphor: Lauraceae
1 1. Uvela phi umthi wesinamon?
2 2. Iimpawu zeBotanical zomthi wesinamoni
3 3. Iimfuno zeemeko zangaphandle zemithi yesinamoni
4 4. Ukukhula kunye nophuhliso lweempawu zemithi yesinamoni
5 5. Ezinye iintlobo zesinamon ezidumileyo namhlanje
6 6. Amalungu asetyenzisiweyo kunye nokwakheka kweekhemikhali
6.1 7.1 Ixabiso lezoqoqosho kumthi wesinamoni
6.2 7.2 Ixabiso lesinamon lamayeza
1. Uvela phi umthi wesinamon?
ICinnamon yenye yezona zinongo ezindala ezaziwa malunga ne-2000 BC. AmaTshayina angawona afumana kunye nabasebenzisi bokuqala emhlabeni. Emva koko, yaziswa eYurophu ngeSilk Road. Ngelo xesha isinamon yayigqalwa njengeyeza eliluncedo yaye yayisetyenziswa kakhulu ekwenzeni amayeza nakwizithethe zonqulo.
– Emhlabeni: ICinnamon ilinywa kwiindawo ezininzi njengakuMazantsi eTshayina, eLaos naseMyanmar. Ilinywe e-Indonesia, eIndiya, eSri Lanka, eMzantsi Melika, eMzantsi Melika naseHawaii…
– EVietnam: Isasazwa kulo lonke ilizwe njengeQuang Ninh, Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen, Bac Giang, Lao Cai, Yen Bai, Ha Giang, Tuyen Quang, Ha Tay, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh , Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Ba Ria – Vung Tau. Apho, kukho iindawo ezine ezigxininisiweyo zokukhula kwesinamoni: iYen Bai, iQuang Ninh, iThanh Hoa-Nghe An kunye neQuang Nam-Quang Ngai.
2. Iimpawu zeBotanical zomthi wesinamoni
– ICinnamon ngumthi womthi, ongapheliyo, umthi omdala unokuba ngaphezu kwe-15 m ubude, kwaye ububanzi bufikelela kwi-40 cm.
– Inkqubo yeengcambu: Ukukhula ngamandla, iingcambu zigxininise kakhulu emhlabeni, iingcambu zilula ukusabalalisa kunye nokuwela omnye komnye, ngoko umthi wesinamoni unamandla okuhlala kakuhle kwiindawo ezinqabileyo.
– Inkqubo yomzimba: I-Cinnamon inamagqabi aluhlaza, unyaka wonke, isiqu esingqukuva ngokulinganayo, ixolo elingwevu langaphandle, licandeke kancinci kancinci.
Iimpawu zeBotanical zesinamoni
– Inkqubo yamagqabi: I-Cinnamon inamagqabi alula akhula ngokwahlukeneyo okanye asondele ngokuchasanayo, amagqabi aneemitha ezi-3 ezisisiseko eziya kwincam yegqabi kwaye ngokugqamileyo kumzantsi wegqabi, imithambo esecaleni iphantse yangqamana, umphezulu wegqabi uluhlaza ocwebezelayo, ongezantsi. Umphezulu wegqabi uluhlaza bumnyama, umntu omdala ushiya malunga ne-18-20 cm ubude, malunga ne-6-8 cm ububanzi, i-petioles malunga ne-1 cm ubude.
– Intyatyambo yesinamoni: Ukukhula kwii-axils zamagqabi phezulu kumasebe, iintyatyambo zihlangene ngokwazo, zincinci njengesiqingatha sengqolowa yerayisi, ukunyuka phezulu kwamagqabi, amhlophe okanye aphuzi ngombala.
– Isinamoni: Xa iluhlaza iluhlaza, ivuthiwe ijika ibe mfusa, iqunube iqulethe imbewu enye, isiqhamo si-1-1.2 cm ubude, imbewu i-oval.
– Imbewu yesinamoni: Ubume be-oval, kwimbewu yeoli, i-1 kg yembewu yesinamoni inembewu emalunga nama-2500 – 3000.
Iintyatyambo kunye neziqhamo zomthi wesinamoni
– Kwiindawo zomthi wesinamoni ezifana namaxolo, amagqabi, iintyatyambo, iinkuni, kunye neengcambu, zonke ziqulethe i-oyile efunekayo, ngakumbi kwi-bark kunye neyona nto iphezulu ye-oyile efunekayo, ngamanye amaxesha ifikelela kwi-4-5%.
3. Iimfuno zeemeko zangaphandle zemithi yesinamoni
ICinnamon ngumthi othanda imozulu efumileyo yetropiki, enemvula eninzi kunye nelanga elininzi.
– Ilizwe: Imithi yesinamoni ikholisa ukukhula ngokwendalo kwindawo ezinemvula ukusuka kuma-2000 ukuya kuma-4000 mm/ngonyaka. Imvula efanelekileyo yokukhulisa izityalo isuka kuma-2000 ukuya kuma-3000 mm/ngonyaka. Imvula yonyaka kwiindawo apho i-cinnamon ilinywa khona ikholisa ukuba malunga ne-1600 – 2500 mm; ukufuma komoya ngaphezu kwama-85%.
– Ubushushu: Ifanelekile kwimozulu eshushu kunye nefumileyo. Ubushushu obufanelekileyo bezityalo ukuba zikhule kwaye ziphuhlise kakuhle ziyi-20-30.oC. Nangona kunjalo, i-cinnamon isakwazi ukumelana nokubanda (ukuya kwi-0oC – 1oC) okanye ubushushu obuphezulu buxhathisa ukuya kuthi ga kwi-37 – 38oC. Iindawo ezikhulayo zeCinnamon kwilizwe lethu zineqondo lokushisa eliphakathi kwe-20 – 29oC.
Ihlathi leCinnamon eYen Bai
– Umhlaba: I-Cinnamon inokukhula kwimihlaba eyahlukeneyo yemvelaphi yamatye ahlukeneyo (ilitye lentlabathi, i-schist, njl.njl.), emanzi, i-humus-rich, ikhululekile, ibomvu, i-yellow, i-sandy, induli, imihlaba eneasidi (PH 4-6), isondlo- umhlaba ombi kodwa ongenamanzi (ngaphandle kwe-limestone, umhlaba oyisanti, umhlaba onamanzi). Ukuze umthi wesinamoni ukhule kwaye ukhule kakuhle, kucetyiswa ukuba utyale kwiindawo apho usenayo indalo yomhlaba wehlathi, umhlaba unomaleko aphakathi ukuya kobunzima, umhlaba wehlathi usanda kubuyiselwa emva kokulima ngokutshintsha, kunye nokulima. Ihlathi lithe saa ngamatyholo. Iinduli ezingenanto, umhlaba ombi, umhlaba owonakeleyo, umhlaba olahlekelwe ngumaleko obolileyo, ukhukulise umaleko we-humus, uhlwempuzekile kwizondlo, kwaye ulahlekelwe yindalo yomhlaba wehlathi, ongafanelekanga kwimithi yesinamoni.
– Ukukhanya: Ngumthi othanda ukukhanya, kodwa xa usemtsha kufuneka ube nomthunzi. Kwiminyaka emi-3-4 ubudala, umthi kufuneka ukhanyiselwe ngokupheleleyo. Ukukhanya ngakumbi, ngokukhawuleza isityalo sikhula kwaye siphezulu umgangatho weoli ebalulekileyo.
– Ubude: I-Cinnamon idla ngokukhuliswa kwiindawo ezinobude obungaphezulu komphakamo wolwandle njengaseMantla: 200 m; Ummandla ophakathi 500 m; 800 yeemitha emazantsi. Imithi yeCinnamon ekhuliswe kwindawo eziphakamileyo ithande ukuba mifutshane, icothe ukukhula, kodwa inexolo elishinyeneyo nelinamafutha.Xa iphantsi, imithi yesinamoni isoloko ichanabeka kwizinambuzane nezifo, amaxolo abhityileyo kunye neoyile encinci kwixolo, umjikelo wobomi omfutshane.
4. Ukukhula kunye nophuhliso lweempawu zemithi yesinamoni
I-Cinnamon ngumthi onamandla okukhula kwaye ukhule ngamandla kwaye ngokukhawuleza.
– Izityalo zinokukhula kwiindidi ezininzi ezahlukeneyo zomhlaba. Kwithuba elisusela kwi-1 ukuya kwiminyaka emi-5 ubudala, umthi uthanda umthunzi kwaye ufuna umthunzi, xa ukhulile, udinga ukukhanya okupheleleyo. Ukukhanya ngakumbi, ngokukhawuleza isityalo sikhula kwaye siphezulu umgangatho weoli ebalulekileyo.
Indawo yokuzalela imithi yesinamoni
– Imithi yesinamoni ikhuliswa ukusuka kwimbewu ukuya kwinqanaba le-3 – 5 yeminyaka ubudala inokufikelela kumphakamo ophakathi kwe-2.2 m (ubuninzi be-2.7 m). Umthi oneminyaka eyi-9 unobude obuphakathi kwe-6.9 – 7.0 m, kunye nobubanzi obuyi-20 – 21 cm. I-Cinnamon inamandla okuhlaziya amahlumela asuka kwingcambu yomelele kakhulu. Kwimveliso, emva kokusika umthi ukuqokelela amagxolo, ukusuka kwingcambu kuya kuvelisa amahlumela amaninzi amancinci. Kuyenzeka ukuba ushiye ihlumela kwaye uqhubeke nokunyamekela imidumba ukuze ivunwe kamva.
– Ixesha leentyatyambo Epreli-Agasti, ixesha leziqhamo Oktobha-Disemba okanye ngoJanuwari-Februwari kunyaka ozayo.
5. Ezinye iintlobo zesinamon ezidumileyo namhlanje
– Ehlabathini, iintlobo ezimbini eziphambili zithandwa: i-cinnamon yaseTshayina (i-Cinnamomum cassia BL) kunye ne-Sri Lankan sinamoni (iCinnamomum zeylacium).
– EVietnam, ukongeza kwiintlobo ezimbini zesinamoni ngasentla, kukho nezinye iintlobo zesinamoni ezifana neThanh cinnamon (Cinamomum loureiri ness) edla ngokukhula eNghia Lo, Yen Bai … Ngoko kwilizwe lethu kukho malunga ne-10 iintlobo zesinamon, kodwa uninzi lwazo ngamagqabi esinamon.
Umthi wesinamoni wakudala uneminyaka engama-200 ubudala eTien Giang
* Iimpawu zezinye iintlobo zesinamon ezidumileyo namhlanje
– Iindidi zeCinnamon Ciamomum cassia BL: Ikwaziwa ngokuba yisinamoni enesiqu esinye, 12-17 m ubude, amagqabi e cinnamon made, abengezelayo kwaye agudileyo kumphezulu ongaphezulu, anoboya obucolekileyo ngaphantsi. Amagqabi mancinci, ahambelana omnye komnye. Iintyatyambo zikhula zibe ngamaqela, iziqhamo ezi-oval. Olu hlobo lwesinamoni luhlala lukhula kumaphondo eQuang Ninh, Yen Bai naseQuang Nam. Imveliso isetyenziswa ikakhulu njenge-condiment kunye nokutya. Ilinganiswe njengolona hlobo oluhle kakhulu lwesinamoni, i-sinamoni yinto ekhethekileyo, enexabiso eliphezulu, ehlala isetyenziswa njengeyeza kunye ne-tonic. Nangona kunjalo, umgangatho wolu hlobo lwesinamoni uyahluka ukusuka kummandla ukuya kummandla. Ukuba ikhule eYen Bai, inevumba elimnandi, ngelixa ikhule eQuang Ninh okanye eQuang Nam, inevumba elimnandi. Isivuno somthi wesinamoni okhule eYen Bai kwiminyaka eyi-10 ubudala kunye nobubanzi obuyi-15-20 cm, ivunwe kwi-15-30 kg yexolo elitsha (elilingana ne-8-15 kg yexolo elomileyo), 0.3 – 0.5 m3 iinkuni kunye 30 kg amagqabi unako distill 0.21 kg yeoli ebalulekileyo.
Iindidi zeCinnamon Ciamomum cassia BL
– Iintlobo zesinamoni zaseSri Lanka: Inesiqu esimalunga ne-20 – 25 m ukuphakama, amasebe amancinci anesikweri, anoboya obufutshane, athe saa. Amagqabi eCinnamon achasene, amade kunye ne-oval, agudileyo, abhekiselele kancinci kwisiseko. Iintyatyambo zikhula zibe ngamaqela, iziqhamo zikhula zibe ovali. Olu hlobo lwesinamoni lunokuguquguquka okubanzi, ngoko ke ikhuliswa kumaphondo afana neThanh Hoa, Nghe An, Vung Tau kunye neTay Ninh. Udidi lwesinamoni lwaseSri Lanka aluthandwa yimarike kuba yisinamoni enomzimba omncinci enezinto eziphantsi eziyimfuneko kunye nesivuno esincinci.
Isinamoni esri Lanka
– Iintlobo zeThanh cinnamon: Umthi udla ngokuba yi-12-20 m ubude. Amagqabi a-oval, a-oblong kuzo zombini iziphelo, malunga ne-spike enemithambo emithathu eyahlukileyo. Iintyatyambo zesinamoni zihlangene, iziqhamo ezingqukuva, eziluhlaza xa zincinci, zimfusa-mdaka kwaye ziyamenyezela xa zivuthiwe. Olu luhlobo lwesinamoni olunexabiso eliphezulu kakhulu lonyango kunye nokukhuthaza impilo. Imveliso ye-Thanh cinnamon: Imithi ye-sinamoni eneminyaka eyi-15 ukuya kwe-20 iya kuba nobubanzi be-20 – 30 cm, inika i-30 – 50 kg yamaxolo amatsha (15 – 20 kg yexolo elomileyo), 0.3 – 0.5 m3 iinkuni kunye 50 kg amagqabi distillate 0.28 – 0.35 kg yeoli ebalulekileyo.
– Ukongeza kwiindidi ze-cinnamon ezingentla, ilizwe lethu linenani lezinye iindidi zesinamoni ezikhula ngokwemvelo kumaphondo eThanh Hoa, Nghe An, Lao Cai, Ha Giang, Hoa Binh … njengesinamoni emdaka okanye ebomvu. isinamoni (iCinamomum tetregomum Chev), i-cinnamon Trench (Cinamomum caryophyllus Moore), Isinamon enkulu (iCinamomum iners Reinw)… ezi ntlobo zesinamoni zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zithengi sehlathi.
6. Amalungu asetyenzisiweyo kunye nokwakheka kweekhemikhali
– Amacandelo asetyenzisiweyo aquka: Igxolo lesiqu, ixolo lesebe. Oku kubizwa ngokuba kukuthotywa isinamon.
– Ukwenziwa kweekhemikhali: Umxholo weoli efunekayo kwixolo lesinamoni uphezulu kakhulu (1.0 – 4.0%), ngelixa emagqabini kunye namasebe amancinci ahlala ephantsi (0.3 – 0.8%). I-oyile efunekayo evela kwi-peel i-pale yellow-brown, ithelekiseka, i-spicy, i-aromatics, i-sweet, ishushu, inzima kunamanzi; Ngesithako esiphambili (E) – cinnamaldehyde (70 – 95%); Kukwakho malunga nezinye iikhompawundi ezimalunga ne-100. I-oyile ebalulekileyo evela kumagqabi e-cinnamon idla ngokuba ntsundu ngombala omdaka kwaye eyona nto iphambili yi (E) – cinnamaldehyde (60 – 90%). Umxholo we (E) -cinnamaldehyde umisela umgangatho weoli ye-cinnamon ebalulekileyo. Ioli ye-cinnamon yorhwebo kwimarike yehlabathi ifuna umxholo we (E) – i-cinnamaldehyde 70 – 95% (ISO:> 80% (E) – cinnamaldehyde). Ukongeza kwioli efunekayo, i-cinnamon bark iqulethe i-tannins, i-resins, iswekile, i-calcium oxalate, i-coumarins kunye ne-mucilages.
7.1 Ixabiso lezoqoqosho kumthi wesinamoni
– Iimveliso ezivela kumthi wesinamoni ezifana neoli ye-sinamoni ebalulekileyo, i-cinnamon bark okanye i-cinnamon powder zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lokutya, kumayeza kunye nakubomi bemihla ngemihla yabantu. Amaxabiso ahlukeneyo okusetyenziswa akhuthaze abathengi kwaye azisa ixabiso elikhulu lezoqoqosho kubavelisi kunye nabaqhubekisi.
Ngokutsho kweengcali zoqoqosho, i-sinamon ngumthombo omkhulu wezoqoqosho, eyona nto iphambili, ehambelana nobomi beentlanga ezincinci ezifana neDao, Thai kunye neH’Mong kwiphondo laseYen Bai, iThai kunye neMuong kwiphondo laseNghe.An, Thanh Hoa, Ca tu, iCa toong yephondo laseQuang Nam, iQuang Ngai kunye neThanh Y kunye neThanh Phan yephondo laseQuang Ninh.
Indawo yezinto zesinamoni ezithunyelwa ngaphandle
– Ukuvavanya ukufaneleka, iingcali zathi: Imimandla yeentaba yelizwe lethu ineemeko ezifanelekileyo zendalo, ezilungele i-sinamoni, ngoko ke kuyimfuneko ukuphuhlisa umbutho wemveliso ube ngumthombo omkhulu, ozinzileyo kunye nexesha elide. ekujoliswe kuko ekufumaneni inzuzo yezoqoqosho elinganayo.
7.2 Ixabiso lesinamon lamayeza
– Iimpawu zonyango zesinamon zixatyiswa kakhulu. I-Cinnamon ioli efunekayo iyeza lendalo elikhuthaza ukujikeleza kokuphefumula, ukwandisa ukuhamba kwamathumbu emathunjini, i-digestion, i-excretion, ikhulula iinqanawa, iphakamisa i-immunity, ine-antihistamine enamandla kunye ne-antibacterial effect.
– Ithathwa njengelinye lamayeza amane aphezulu ezempilo. I-Cinnamon inefuthe lokuxhasa unyango lwezifo kwaye inamandla okukhuthaza ngokufanelekileyo impilo. ICinnamon isetyenziswa njengeyeza lokunyanga izifo ezinje ngeentlungu zesisu, ukungagatyi kakuhle, ukomelela, ukubetha kancinci kancinci, iintlungu zomqolo, ukudinwa kwamadolo, ukukhohlela kwesifuba…
Ukongeza, uthotho lwezifundo zonyango zanamhlanje zibonakalise ukuba i-cinnamon ineenzuzo ezininzi zempilo ezinjengokunciphisa amanqanaba eglucose egazini kunye nokuxhasa unyango lwesifo seswekile. kunye nemigraines …
ICannelier de Ceylan (Cannelier de Ceylan)
Umthombo: Umlawuli jikelele – NO